Tsy misy fanomezana tsara kokoa noho ny andro nahaterahana! Mpamaky fahana 500! | Martech Zone
Alarobia, Aprily 18, 2007 Alahady 5 Febroary 2017 Douglas Karr
Votoatiny, Passion, Momentum… ireo no singa telo miresaka amin'ny mpanjifako momba ny resaka bilaogy aho. Misy ny olona mihevitra fa ny fanaovana bilaogy dia ezaka mahadomelina - indrindra rehefa miresaka ny fahombiazan'ny fitorahana bilaogy ianao. Mazava ho azy fa ny fifanoherana dia ny antony mahatonga ny olona hihaino anao raha izany no izy tsy mahomby? Mametraka ny isan'ny fahana aho ary mitazona ny laharana Technorati ahy sy ireo fampahalalana hafa mba hahafahako manome porofo ny fahombiazan'ny lohahevitra bilaogiko.
Rahampitso no fitsingerenan'ny andro nahaterahako. Matetika aho no mangina fitsingerenan'ny andro nahaterahako satria andro mampalahelo amin'ny tantara izany. Tao anatin'izay fotoana izay dia lasa herinandro nahory (ampio Virginia Tech amin'ny lisitr'ireo hetsika mahatsiravina ankehitriny).
Na izany aza, tsy afaka ny tsy hametraka ity kisary ity aho ary misaotra ireo olona tamin'ny fotoana nahaterahana tsara indrindra azon'ny lehilahy angatahina! (Ankoatry ny zanako sy ny AppleTV io volavolan-dalàna io ary Carla nahazo ahy.)
Namaky mpamaky 500 mahery aho tamin'ny famahanako anio!
Misaotra ny rehetra nifikitra! Roa herinandro lasa izay Natolotra ny lahatsoratro faha-500. Manohy manandrana manangana lehibe aho afa-po, ny passion Mahery tahaka ny taloha, ary ny vahana mitohy ny bilaogiko! Namaky tany amin'ny toerana iray aho fa mpitsidika 1% fotsiny no tena maneho hevitra. Raha saro-kenatra ianao ary tsy mahatsapa izany, fantaro fotsiny fa tena tiako ny orinasanao!
Fanamarihana iray lehibe: Misaotra manokana John Chow iza no nanome aingam-panahy ahy hanao fanovana vitsivitsy hisarihana mpamaky bebe kokoa amin'ny sakafoko. Ho hitanao ny lahatsoratra kely eo ambanin'ilay lahatsoratra manasa anao hanatevin-daharana ny fahano. Ary koa, manolotra dokam-barotra mandritra ny herintaona maimaim-poana fampiantranoana ao anaty ny sakafoko aho. Miaraka amin'ny toro-hevitr'i John, heveriko fa nanafaingana kely ny fananganana RSS aho. Misaotra John!
Tags: john chowmpamakyRSSTechnoratifandresena
Na ny zazalahy lehibe aza hadinony ny fahaizany mampiasa!
Apr 18, 2007 ao amin'ny 8: PM PM
Miarahaba anao amin'ny faha-500 sy tsingerintaona nahaterahana!
Mendrika tsara, tohizo ny atiny mahafinaritra dia ho tonga 1000 ianao amin'ny fotoana fohy!
Apr 18, 2007 ao amin'ny 10: PM PM
gratz amin'ny lvl
arahabaina sy tratry ny tsingerintaona nahaterahana!
Apr 18, 2007 ao amin'ny 11: PM PM
Arahaba Doug, mendrika tokoa!
Apr 19, 2007 amin'ny 1: 23 AM
Faly ho anao aho, arahaba soa ary tratry ny tsingerintaona nahaterahana!
Vao haingana aho no nanomboka namaky ny bilaoginao ary heveriko fa loharano mahafinaritra. Resy lahatra aho fa manana loharano sarobidy ianao. 500th dia zavatra mahafinaritra. Tohizo ny asa tsara izay andrasako hamaky ny lahatsoratrao amin'ny ho avy.
Apr 19, 2007 amin'ny 7: 59 AM
Misaotra tamin'ny teny soa James! Ny fandraisana hevitra toa izao dia raisina an-tanan-droa hatrany. 🙂
Apr 19, 2007 amin'ny 2: 58 AM
Arahabaina, ary ny tsara indrindra ho an'ny tsingerintaona faha-29 anao 😉
… Ary fety fanaovana tsingerintaona nahaterahana, fahasalamana ary tampon-tampon'ny 2500 ao Technorati.
Apr 19, 2007 amin'ny 7: 56 AM
Misaotra Martin. Miala 10 taona ianao, na izany aza. Làlana iray miaraka amin'ny fahanterana, ny iray hafa amin'ny fahamatorana. Tsy holazaiko hoe iza no iza, na izany aza! 🙂
Apr 19, 2007 amin'ny 4: 33 AM
Miarahaba anao tokoa Doug ..
Ny mpamaky fahana 500 dia tsy zava-bita ratsy .. Mampiseho fotsiny ny ezaka efa nataonao mba hanohanana azy ireo izany ..
Asa tsara ary tohizo
Apr 19, 2007 amin'ny 7: 38 AM
Arahabaina! Zava-bita BE! BTW, fiolahana fitomboana mahafinaritra izany.
Apr 19, 2007 amin'ny 7: 58 AM
Misaotra Thor. Heveriko fa ny fiakaran'ny fitomboana dia porofom-panamafisana faingana noho ny zavatra hafa rehetra. Tena tiako ny mampihatra famakafakana statistika vitsivitsy amin'ny isan'ny lahatsoratra rehefa mandeha ny fotoana miaraka amin'ny valin'ny motera fikarohana sy ny fametrahana azy. Azoko antoka fa misy fifandraisana tsara eo. Androany hanao matematika aho!
Apr 19, 2007 amin'ny 9: 03 AM
Tratry ny tsingerintaona nahaterahana, ary arahabaina nahatratra ny # 500! Misaotra anao tamin'ny zavatra nataonao.
Apr 19, 2007 amin'ny 11: 16 AM
Doug, miarahaba anao. Mendrika tanteraka. Tiako ny tranokalanao sy ny atiny. Tohizo ny asa tsara. Ary, Tratry ny tsingerintaona nahaterahana.
Apr 19, 2007 ao amin'ny 12: PM PM
Hey Doug - Ny lalana tokony haleha! Miorina amin'ny atiny lehibe omenao, miloka aho fa ho haingana ny làlana mankany amin'ny 1000.